Izibonelelo eziphangaleleyo zepropathi-deluxe; ibhafu eshushu & ngaphezulu
Yonwabela ubuhle bendalo kwindawo yethu entle yabucala enamagumbi ama-2. Ifumaneka eCulpeper County Virginia, ukude nemizuzu kude kwindawo yokutyela ekumgangatho wehlabathi, iiwineries, iibreweri ezinkulu ngelixa kuphela imizuzu engama-20 ukusuka eShenandoah National Park.
Buyela kwidesika yokuntywila ngokuhlwa kwibhafu eshushu emva kosuku lokuphonononga indawo.
Esi sithuba sibonelela ngebhedi yokumkanikazi, indawo eninzi yokuhlala, igumbi lokuhlambela labucala eligcweleyo, i-walk in closet, i-50 inch smart TV, i-WIFI, ifriji encinci, i-ice maker, i-microwave, kunye nomenzi wekofu.
Le suite yabucala ikumgangatho ongaphantsi wekhaya lethu, elibekwe kwiihektare ezi-5 eCulpeper, County Virginia. Iindwendwe zingena kwi-suite ukusuka kwindawo enkulu yokupaka eneendawo zokupaka ezinikezelweyo ngasemva kwendlu. Sinikezela ngengeniso engenasitshixo ukuze kubelula ukuzijonga.
Indawo ezolileyo kwimizuzu nje ukusuka kwidolophu yaseCulpeper.
Sifuna ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu zinendawo yokuphumla kunye nokuphumla. Silapha ukuba ufuna nantoni na, kodwa ngenye indlela siya kuhamba malunga nosuku lwethu oluqhelekileyo.